एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्व-अर्थमन्त्री भन्छन,- एमसीसी राष्ट्रघा,ती भन्नेहरुको काम नै राष्ट्रघा,ती! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – Nepal Online Khabar
एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्व-अर्थमन्त्री भन्छन,- एमसीसी राष्ट्रघा,ती भन्नेहरुको काम नै राष्ट्रघा,ती! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
काठमाडौं । प्रमुख प्र,तिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले राष्ट्रियता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्याउने कुनैपनि भावना र शब्द एमसीसीको सम्झौतामा नभएको दा,बी गरे । शुक्रबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एमसीसी राष्ट्रघा,ती छ भनेर ज-जसले न,कारात्मक प्रचार गरिरहेका छन् स्वयम तिनीहरुको काम राष्ट्रघा,ती भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले एमसीसी एक रातमै र बन्द कोठाबाट नआएको जिकिर गरे । उनले भने-‘यसका निमित्त धेरै लामा प्रक्रियाहरु अगाडि बढेका छन् ।
बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशिल कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कार्यकालको टाईममा एमसीसीले एउटा गति लिएको थियो । त्यही लय र गतिको सिलसिलामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो चाहीँ सम्झौता भयो । मन्त्रिपरिषदले सम्झौता गर्न मलाई निकास दिएको छ, त्यतिवेला तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रपनि सरकारमा थियो ।’
Prevएमसीसी जसरी भएपनि सम्झौता लागु गर्नु पर्छ : विमलेन्द्र निधि…हेर्नुहोस!
Nextटिकट काट्न सक्ने नेपालीहरू स्वेदश फर्किए नसक्नेहरु खाडीमै अलपत्र…हेर्नुहोस|
खुसीको खबर : वरिष्ठ कलाकार हरिवंश र उनकी श्रीमतीले कोरोना भाइ’रसलाई जिते…हेर्नुहोस् ।